के सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे सुरक्षित छन्? | जिing्गकी
गर्मी यहाँ छ, र यसको मतलब तपाईं शान्त रहनको लागि पर्याप्त समय खर्च गर्दै हुनुहुन्छ।
चिसो बनाउनको सब भन्दा द्रुत तरिकाहरू मध्ये एक भित्रबाटबाटै छ: त्यहाँ तापक्रम ल्याउन र तपाईंलाई तातो दिनमा स्फूर्ति प्राप्त गर्न मद्दत गर्न आइस कोल्ड ड्रिंक जस्तो केही छैन।
त्यो चिसो पेय प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका भनेको बरफको साथ हो। क्युबड, दाह्री वा कुचिएको, बरफ गर्मी पिट्न को लागी एक लामो समय सम्म एक गोप्य हतियार भएको छ। यदि तपाईंले भर्खरै नयाँ आइस क्यूब ट्रेको लागि किनमेल गर्नुभएन भने, तपाईं उपलब्ध सबै विकल्पहरू देखेर छक्क पर्नुहुनेछ। जमिन पानी पर्याप्त सरल कार्य हो, तर कार्य गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका विभिन्न तरिकाहरू छन्, परम्परागत प्लास्टिकको बरफ ट्रेदेखि नयाँ फ्याled्ग्ड सिलिकॉन र स्टेनलेस स्टील क्यूब निर्माताहरू।
के प्लास्टिक आइस क्यूब ट्रे सुरक्षित छन्?
छोटो उत्तर: यो निर्भर गर्दछ कि तपाईंले यो कहिले खरीद गर्नुभयो। यदि तपाइँको प्लास्टिक ट्रेहरू केहि बर्ष भन्दा बढी पुरानो हो, त्यहाँ तिनीहरूमा बिस्फेनल ए (बीपीए) हुने राम्रो मौका छ। यदि तिनीहरू नयाँ छन् र बीपीए-मुक्त प्लास्टिकको साथ बनेका छन् भने, तपाईं जानु राम्रो हो।
खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) का अनुसार, बीपीए हाल धेरै खाना प्याकेजहरूमा फेला पर्दछ, प्लास्टिकको कन्टेनर र केही क्यानको लाइननिंग सहित। यस पदार्थले खानामा लीच गर्दछ र खपत हुन्छ, जहाँ यो शरीरमा रहन्छ। यद्यपि अधिकांश व्यक्तिहरूको कम्तिमा शरीरमा बीपीए हुने केही ट्रेसहरू छन्, एफडीएले भन्छ कि यो वर्तमान स्तरमा सुरक्षित छ र त्यसैले चिन्ता लिने कुनै कुरा छैन - वयस्कहरूको लागि।
आधुनिक प्लास्टिक आईटमहरूमा तल एक नम्बर छ जुन तपाईंलाई बताउँछ कि यो कस्तो प्रकारको प्लास्टिक हो। यद्यपि हामी यी बारे सामान्यतया सोच्दछौं कि यो पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिदैन, त्यो नम्बरले तपाईंलाई বিपीए को मात्रा पनि बताउन सक्छ कुनै दिइएको वस्तुमा फेला पर्दछ। आइस क्यूब मोल्डहरू र खाना भण्डारण कन्टेनर the वा storage सँग सम्भव भएसम्म बेवास्ता गर्नुहोस्, किनकि यी धेरै नै अधिक मात्रामा बीपीए हुने सम्भावना हुन्छ। अवश्य पनि, यदि तपाइँको ट्रे यति पुराना छन् उनीहरूसँग कुनै रीसायकल प्रतीक छैन, तिनीहरूसँग प्रायः पक्कै पनि तिनीहरूमा बीपीए छ।